Mayelana NATHI - Henan Haofeng Aluminium Technology Development Co., Ltd.
IHenan Haofeng Aluminium Technology Development Co, Ltd., Eyasungulwa ngoJanuwari 2010, itholakala e-Changyuan City, eSifundazweni saseHenan, inhlokodolobha elwa nokugqwala eChina. Kuyinto ibhizinisi zobuchwepheshe onguchwepheshe ukukhiqizwa aluminium esiliva slurry elintantayo aluminium slurry esiliva, non elintantayo aluminiyamu slurry, flash aluminium slurry isiliva futhi kuhlanganiswe ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza kanye sales. Le nkampani ihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-50000, futhi zonke izakhiwo zokwakha zihlangabezana nezidingo zikazwelonke zokukhiqiza izimboni.
Kusukela yasungulwa, inkampani igxile ku-R & D kanye nasekukhiqizeni i-aluminium pulp yesiliva. Ngemuva kokusebenza kanzima nokuqoqwa kwezobuchwepheshe kwabo bonke abasebenzi, sekukhule kwaba ibhizinisi lobuchwepheshe besimanje nelisha elinabasebenzi abacishe babe yikhulu, ama-workshops wokukhiqiza osezingeni eliphakeme, amalabhoratri asezingeni eliphakeme, imishini yokukhiqiza esezingeni eliphezulu nezinsimbi zokuhlola, namandla wonyaka wokukhiqiza angaphezu 4000 amathani. Ukunamathisela okuntantayo kwesiliva kwe-aluminium kanye nochungechunge lwe-aluminium oluntantayo olucijile olwenziwe inkampani yethu lusetshenziswa kakhulu kupende, ukumboza, ukuphrinta nokudaya, uyinki, i-masterbatch epulasitiki, imoto, i-hardware nemishini yasendlini nezinye izimboni.
Njengoba umkhiqizo wafakwa emakethe, silandele ngokuqinile izindinganiso ze-iso1247-1974 (E) ne-Hg / t2456.1-2013 ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokuqina kwemikhiqizo yethu. Besihlala njalo sinamathela kwifilosofi yebhizinisi "yobungcweti, ukwethembeka, ubuhlakani kanye nokuqamba izinto ezintsha", ngokuthembela kwikhwalithi yobungcweti, uhlelo lokuthengisa oluphelele, ukusekelwa okuphelele nokucabangelayo kwezobuchwepheshe, futhi sisungule ibhizinisi namakhasimende amahle kakhulu Idumela nedumela lethu.
I-Haofeng Aluminium Co, Ltd izimisele ukubambisana namakhasimende aphesheya kwezilwandle ukudala ubuhlakani!